गृहको प्रतिवेदन : रुकुम घटनाको योजनाकार वडाध्यक्ष ! – हाम्रो देश
गृहको प्रतिवेदन : रुकुम घटनाको योजनाकार वडाध्यक्ष !
काठमाडौं । पश्चिम रुकुममा ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सामूहिक हत्या प्रकरणमा चौरजहारी नगरपालिका–८ का जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको छ ।
वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लले युवतीको घरमा आएका नवराज विक र उनको साथीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीयलाई भेला गर्नुका साथै नेपाल प्रहरीलाई समेत गुमराहमा राखेको पाइएको छ। घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सह-सचिव जितेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा बसेको टोलीको प्रतिवेदनमा वडाध्यक्ष मल्ललाई रुकुम घटनाको योजनाकार भनिएको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार १० जेठमा नवराज १९ जनाको समूह लिएर युवतीको घर भएको ठाउँ चौरजहारी पुगेका थिए । युवतीका बुबाले यसबारे मल्ललाई भनेपछि अपराधिक कार्यमा संलग्न भएको भेटिएको गृहले बताएको छ ।
उनले लकडाउनको समयमा जाजरकोटबाट केटाहरू छिरेभन्दै नियन्त्रणमा लिने योजना बनाएको पाइएको छ । त्यसपछि ९८४८९६९७३३ नम्बरको मोबाइलबाट उनले मानबहादुर मल्ललाई ९८६६८६८९६८, नेत्रबहादुर मल्ललाई ९८४१५३७६७३ नम्बरमा फोन गरी गाउँलेलाई एकीकृत गराएको पाइएको छ ।
उनले आफ्नो मोबाइलबाट इलाका प्रहरी कार्यालय, चौरजहारीको ०८८–४०११०० नम्बरमा पनि फोन गरे । विवाद हुन लागेको भन्दै सूचना पनि दिए तर स्थान भने उल्टो बताइदिए । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘वडाध्यक्षले फोनमा ढुंगेखानीमा घटना भएको भनेर टिपाएका थिए, त्यसैले प्रहरी त्यता गयो । उनले औल जिउलामा युवाहरूलाई छेक्ने योजना बनाएका रहेछन् ।’
वडाध्यक्षले गलत सूचना दिएका कारण प्रहरी सो समयमा घटनास्थलमा पुग्न नसकेको पाइएको छ ।
एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘गाउँलेलाई भेला गरेर धेरै टाढा पुगिसकेको पीडितलाई पिछा गरेर ढुंगा, मुढा प्रहार गरी नवराज विक, टीकाराम सुनार, गणेश बुढासहित ६ जनालाई हत्या गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइएको छ ।’
वडाध्यक्ष मल्लसहित ३४ प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुकुममा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐनअनुसार कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता भएको छ ।
मल्लको दाबी – मैले कसैलाई कुटेको छैन
हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका वडाध्यक्ष मल्लले भने आफूले नै गलत सूचना पाएको प्रहरी समक्ष दाबी गरेका छन् । उनले घटना भएको दिन आफू क्वारेन्टिनको अवलोकनमा रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘नगरपालिकाका स्वयंसेवकहरू पनि क्वारेन्टिन अवलोकन गर्न आएकाले उनीहरूलाई पनि केटाहरू आएको जानकारी गराई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भनी म गाउँतिर गएको हो ।’
आफू गाउँमा पुग्दा केटाहरूलाई नदेखेको बताएका छन् । तर खोज्दै जाँदा घटनास्थल भएको स्थानमा एक जना कार्की थरका केटालाई प्रेमबहादुर मल्ल र डिल्ली मल्लले नियन्त्रणमा लिएको देखेको बताएका छन् । ‘अन्य प्रतिवादीहरू पछाडिबाट दौडिँदै आउँदै थिए, अन्य केटाहरू मभन्दा अगाडि नदी बगरतिर गइसकेका रहेछन्’, उनको दाबी छ, ‘मैले कसैलाई कुटपिट गरेको होइन ।’